Hoyga > Alaabada > Heerkulka Wejiga Hore ee Caafimaadka Joogtada ah > Heerkulka heerkulka ee FDA CE
Heerkulka heerkulka ee FDA CE Fariin Wejiga Hore ee Joogtada ah,Heerkulbeegga infakshannada Waa FDA CE heerkul cabirka dhegta iyo wejiga sanka hore iyo digriiga, wehelka caafimaad ee aan lala xidhiidhin heerkulbeega bulsheed ee qaangaarka ee heerkulbeega ilmaha ee qaangaarka ah.
Codsiga / Shaqada: Cabbirka heerkulka jirka, cabirka heerkulka dusha sare ee shahaadada ee FDA CE. Loogu talagalay fasalka caafimaadka. Baadhitaanka ka-hortagga fayraska ee heerkulka jirka. Qiyaasida heerkulka jirka ee dadweynaha.
Nooc-bulsheed aan lala xiriirin aalad heerkul cabbiraadda degdega ah. Waqtiga cabirka <2s. Cabbir cabir: heerkulka 34.0 â „ƒ -42.9 â„ ƒ; FDA CE wajiga hore ee cabiraada heerkul cabirka leh 1cm-3cm
FDA CE ansaxsan jiritaanka heerkulbeeg heerkulkiisu saran yahay: 5 sano
Tirada heerkulbeega heerkulka FDA CE ee wajiga hore laga xaqiijiyey waa mid aad u weyn, qiimuhuna waa gorgortan!
Weydiimaha waa la soo dhaweynayaa! Waxaan kugu soo jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood!
Maska Flat mask Maska N95 Mashiinka Boorka Mashiinka ah